Accueil > Gazetin'ny nosy > Pety Rakotoniania: “Fanjakana nangalatra no misy teto hatramin’ny 2009”
Pety Rakotoniania: “Fanjakana nangalatra no misy teto hatramin’ny 2009”
Nihaona tamin’ny mpanao gazety indray ingahy Pety Rakotoniaina izay filohan’ny antoko Tambatra tamin’ny alatsinainy teo. Ingahy Pety Rakotonianin izay tsy nihambahamba mihitsy nilaza ny fahitany ny raharaham-pirenena ankehitriny. Isan’ny nisarika anay tamin’izany ny filazan’ity mpanao pôlitika zafikelin’ingahy Ralaimongo ity hoe: “fanjakana mpangalatra no nisy teto nanomboka ny taona 2009 ka hatramin’izao 2018 izao”.
Niaraha-nahita hoy izy fa mazava ny zava-nisy teto mba hanaporofoiko izany. Voalohany indrindra dia nankaiza ny vola vidin’ny andramena na ny “bois des roses” izay mahatratra 1 miliara dôlara tamin’ny taona 2011 tamin’ny fitondrana tetezamita iny. Io no voalaza fa vidin’ireny hazo sarobidy ireny. “Nankaiza io vola io”, hoy ihany izy. Tsy io ihany nefa no vola very nandritra ny fanjakan’ingahy Andry Nirina Rajoelina sy ny mpitondra niaraka taminy tao fa mahatratra hatrany amin’ny 5 miliara dôlara. Fantatra fa maro ny olona nanan-karena tampoka tamin’ireny mpitondra ireny ka nandefa ny vola aman-karenany any Dubai, sy nosy Maurice ary any amin’ny firenena hafa koa.
Tsy ny andramena ihany no nahodinkodin’ny mpitondra tamin’ny tetezamita tamin’ny andro nitondran’ingahy Andry Nirina Rajoelina iny fa hatramin’ny volamena koa. Fantatra fa volamena 60 taonina no naondrana antsokosoko teto Madagasikara hoy hatrany ny filazany.
Tokony hifona amin’ny vahoaka Malagasy ingahy Andry Nirina Rajoelina raha ny filazan’i Pety Rakotoniaina hatrany noho ireo antony ireo. Nisy vola very 3 miliara dôlara isan-taona teto Madagasikara tamin’iny fitondrany iny.
Tsy afa-miala amin’izany koa ingahy Hery Rajaonarimampianina hoy ihany Pety Rakotoniaina satria izy no minisitra ny Vola tamin’izany ary mbola filoham-pirenena nalefan’ingahy Andry Nirina Rajoelina koa amin’izao repoblika fahefatra izao. Mbola ny zava-nitranga tamin’ny fotoanan’ny tetezamita ihany no niseho ankehitriny, ary izao iaraha-mahita izao no vokany eto amin’ny firenena.
Raha mijery ny zava-misy ankehitriny dia manjaka be ny kolikoly sy fanodinkodinana ny volam-panjakana ary ny asan-dahalo. Mbola mitohy hatrany ny raharaha andramena.
Mahakasika ny vina fisandratana izay hataon’izy roalahy ireto indray dia nilaza ingahy Pety Rakotoniaina fa tsy ho tanteraka io satria tsy matoky fanjakana intsony ny vahoaka Malagasy. Koa satria rehefa tsy matoky ny mpitondra ny vahoaka dia tsy misy ny famokarana hataony, tsy mety mandoa hetra koa izy ireo. Noho izany dia tsy ho tonga hampiasa ny volany eto ny mpandraharaha sy mpampiasa vola vahiny.
Nambaran’ingahy Pety Rakotoniaina fa toa ny tongotr’alika ny raharaham-pirenena ankehitriny.
Mahakasika ny raharaha Claudine Razaimamonjy dia nanambara ingahy Pety Rakotoniaina fa nahoana ny Betsileo no atao sorona eto Madagasikara. Tokony hisy olona maro hoy izy no higadra amin’io raharaha io fa tsy izy irery. Mitovy tsy misy valaka amin’ny raharahan’ny andramena tamin’ny tetezamita izay lazain’ingahy Andry Rajoelina koa izao. Dokotera Joseph izay minisitra enim-bolana no lazaina fa nahatonga ny fanondranana andramena nefa na dia fiara 4×4 iray aza hatramin’izao tsy ananan’ity minisitra ny Tontolo iainana teo aloha ity. “Fa nahoana no izany no anaovana anay”, hoy i Pety namarana ny teniny?